KALIMAG: CODSIGA BACRIMINTA MAGNESIUM POTASSIUM - SOOSAARKA DALAGGA
Bacriminta Kaliumiga Kalamag: sharaxaad, faa'iidooyin, codsi
Hadafka beeraleydu waa mid goos goos ah.
Mararka qaarkood, si aad u hesho natiijo wanaagsan, waa inaad isticmaashaa habab kala duwan si aad u hagaajisid kobaca iyo bacriminta.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad kordhisid dhalidda dalagyada dhirta, waxaad isticmaali kartaa budada "Kalimag".
Kalimag Kalimag, kaas oo ka kooban potassium sulfate iyo magnesium sulfate, waa mid aad u caan ah maanta. Daawada ayaa lagu heli karaa qaab xoog leh - budada budada, casaan ama casaan-cawl.
Waa muhiim! Daawada ayaa muhiim u ah canab, sida kiisaska la'aanta potassium ee geedka, berry wuxuu yeelan doonaa dhadhan dhanaan, iyo geedku wuxuu u dhiman karaa jiilaalka.
Diyaarinta waxaa ku jira potassium ilaa 30%, magnesium - 10%, sulfur - 17%. Fure u ah wax-ku-oolnimada bacriminta waa isku dhafka ugu wanaagsan ee qaybihiisa. Haddii aad si gaar ah u soo qaadatid, waxaa lagu arki doonaa cillad aan lahayn carrada aan keenin natiijada la rabay. Xayiraadii carrada si siman, odhaahda si habboon uga qayb qaadashadeeda waxay ka kooban tahay nafaqooyin iyo walxo raad raac.
Farsameynta waxqabadka dalagyada
Daroogadu waxay saameyn wanaagsan ku leedahay dalagyada kala duwan:
"Kalimag" waxay si fiican u arkaan geedaha, xoortay, waxay u fiican tahay dharka xididka;
markaad isticmaasho bacriminta, ma jirto isku-uruurin sodium-ka xad dhaaf ah - kaliya xayiraaddii faa'iido badnayd weli waa;
mahadsanaanta magnesium, qiimaha nafaqada ee miraha korodhka iyo waxsoosaarka nitrate-ka ayaa hoos u dhacaya.
Aad bay muhiim u tahay in la isticmaalo qalabka iyadoo loo eegayo tilmaamaha, maaddaama xadgudub ah talooyinka ay keeni karaan dhimashada geedka.
Ma taqaanaa? Magnesium la'aanta waqti dheer ma muujin karto. Si kastaba ha noqotee, waqti ka dib, waxay noqon doontaa mid la ogaan karo qaabka huruudka hore iyo caleenta caleemaha hoose.
Iyada oo si habboon loo isticmaalo daroogada, waxaad ku gaari kartaa wax-soo-saarka kordhaya 30-40%.
Daroogada ayaa saameyn togan ku leh carrada:
Waxtarka gaarka ah ee bacriminta waxaa lagu arkay marka la soo saaro ciidda iftiinka ah, meelaha daaqsinka ah, daaqsinka iyo cawska;
iyada oo la isku darayo habka bacriminta leh daaweynta ciidda, waxaa suurtagal ah in si weyn loo hagaajiyo saamaynta ay ku leedahay carrada;
Fikradda guuleysiga iyo xajinta sare ee "Kalimag" waxay gacan ka geysataa nuugista wanaagsan ee ciidda. Ma ogolaanayso magnesium in laga nadiifiyo dhulka, wuxuu kordhiyaa waxyaabaha la yiraahdo vitamin C, waxana uu sii wadi karaa saamaynta sanadaha soo socda;
Isticmaalka bacriminta ayaa yaraynaya qadarka koloriin koloriin ah ee ciidda.
Natiijada ugu badan ee isticmaalka daroogada ayaa suurtogal ah keliya marka lagu sameeynayo qalab culus.
Habka loo isticmaalo bacriminta "Kalimag"
Kalimag waa bacrimin aad u firfircoon oo loo adeegsan karo siyaabo badan.
Waa muhiim! Si canab si weyn oo dhadhan fiican leh, waa inaadan ka badnayn seddexda buufin inta lagu jiro Bisadkooda.
Sida caadiga ah, xilliga dayrta, wakiilka waxaa loo isticmaalaa sida codsiga ugu weyn, iyo guga - beerista iyo quudinta xidid.
Wixii bacriminta xididka geedo midho leh iyo xoortay, 20-30 g of diyaarinta halkii 1 sq. M ayaa loo isticmaalaa. m pristvolnogo goobada, oo leh khudaarta bacriminta - 15-20 g / sq. m, dalagyada xididka ah - 20-25 g / sq. m
Codsiga foliar, 20 g oo budo ah waa in lagu kala diraa 10 l oo biyo ah, ka dibna lagu buufiyo dhaqanka waa in la sameeyaa. Celcelis ahaan, 1 qoyan oo baradho ah ayaa u baahan doona 5 litir oo xal ah.
Xaaladda organic ee warshadda waxaa lagu quudin karaa xal digaag digaag, duufaan, slurry, digada doofaarka, nettle, ash qoryo ama dhuxul, idaha iyo digada faras.
Waxaa lagama maarmaan ah in la keeno "Kalimag" oo dhulka la dhigo dayrta ama horraanta gu'ga. Dhammaan dhirta waxaad u baahan tahay 40 g / sq. m Haddii beerashada dalagyada dalagyada lagu fuliyo lagu koriyo oo lagu koriyo, waxaa lagama maarmaan ah in la dalbado budada ah inta lagu guda jiro qodista carrada ee heerka 45 g / sq. m
Heerka bacriminta waxay ku xiran tahay nooca carrada iyo celceliska kala duwanaanta min 300 ilaa 600 g halkii mitir oo laba jibbaaran. m
Faa'iidooyinka isticmaalka bacriminta magnesium potassium "Kalimag"
Kalimag wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan:
waxay kordhisaa boqollaalka istaarijka ah ee digriiga baradho, waxay kordhisaa sonkorta sonkorta iyo xididada;
xajistaa magnesium ee ciidda;
waxay ka qayb qaadataa helitaanka goosashada hodan ah iyo hagaajinta sifooyinka tayada ee dalagyada ee koray labadaba dadka iyo sida cawska cagaaran iyo silage.
qaybaha budada waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta ka kooban kiimikada iyo nafaqada;
wuxuu leeyahay waxtarka ugu weyn ee dalagyada leh qayb ka mid ah wax soosaar ah ee qaabka dalagyada xididka iyo xajmiga.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha ugu badan ee yaanyada isticmaala daroogada ayaa ahaa 200% celceliska.
"Kalimag" waxay soo aruurisay tiro badan oo dib u eegis ah waxayna leedahay talooyinka ugu fiican ee lagu dalbanayo dalagga beeraha.